रबि लामिछाने उपरको आरोप र कानुनी प्रकृया - Saptakoshionline
- शलिग्राम पाण्डे
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०३, २०७६ समय: ३:३७:३८
मुलुक कता गैरहेको छ, हाम्रो समाजमा हामीले के चाहेका छौं ? हामी कस्तो समाजको निर्माण गर्ने ? हाम्रा सन्ततिका लागि हामीले आगामी दिनमा के कस्ता अभियान चाल्ने भन्ने बारेमा आज समाजमा चिन्ताको विषय बन्नु पर्ने हो तर हामी कता कता हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थमा, हाम्रो राजनीतिक स्वार्थमा हामी अल्मलिएका त छैनौ । कतै हामी कसैको बहकाउमा त लागेका छैनौ ? हामीले गहन ढंगले सोच विचार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपालीमा उखान छ ‘कागले कान लाग्यो भन्दैमा कागको पछाडी दौडने होइन आप्mनो कान हातले छाम्ने’ पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरेको घटना पछी पुडासैनीको गोजीमा रहेको मोवाइलबाट एउटा भिडियो निकालियो र सो भिडियोमा पत्रकार पुडासैनिलाई रबी लामिछानेले आत्महत्या गर्नमा बाध्य गराएका विषयमा केही कुरा बाहिरिएकोले यो विषय आज सबैका लागि कौतुहल बनेको छ ।
नेपाली जनता जागरुक बन्नु पर्छ, सचेत बन्नु पर्छ, लोकतन्त्रमा जनता सचेत भएनन् भने प्रहरी प्रशासनले जे पनि गर्ने यासमा सचेत, जागरुक वर्गले यस्ता विषयमा चासो लिनैपर्छ यसमा दुई मत छैन । विगतमा निर्मला बलात्कार पछि हत्या काण्डमा नेपाली जनताले देखाएको जागरुकता हरेक ढंगले सकारात्मक थियो । नेपाल जनता सचेत भएकाले नै निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानका क्रममा निर्दोष व्यक्तिलाई प्रहरीले फसाउने प्रयास गरेको भए प्रयास असफल भयो । नेपाली जनताले प्रहरीका हरेक गति विधि र अनुुसन्धान पद्दतीमा जागरुक भएर लागि परेका थिए । र संचार जगतले पनि सो घट्नामा जनताका भावनाको कदर गरेको थियो ।
वर्तमान अवस्थामा पत्रकार पुडासैनिले आत्महत्या गरेको बारेमा के कताबाट हो पत्रकार रवी लामेछानेले हत्या गर्नमा बाध्य पारेको प्रशंग आएको छ । अदालतले पत्रकार लामिछानेलाई पक्राउ गरी शुक्रबार अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेको अवस्था छ । पत्रकार पुडासैनी २० गते चितवनको कङगारु होटलमा साथीहरुसंग रमाइलो गरि खान पिन गरे पछि (मादक पदार्थ समेत सेवन गरिए पछि) एका–एक झुण्डीएको अवस्थामा भेटिए । पुडासैनिले किन आत्महत्या गरे आत्म हत्या हो वा मारेर झुण्डाइएको हो ? यदि मारेर झुण्डाइएको हो भने पुडा सैनिको हत्यामा कस कसको संलग्नता छ । यस बारेमा आम नेपाली जनताले प्रहरीलाई विशुद्ध ढंगले छानविन गर्न दवाव दिइनु पर्छ ।
विगतमा निर्मला बलात्कार पछि हत्या गरिएको घटनामा जस्तो निर्दोष व्यक्तिलाई प्रहरीले नफसाउन । निर्मला बलत्कार पछिको हत्या काण्डमा जनताले दवाव दिएका कारण प्रहरीले पक्राउ गर फसाउन लागिएका दर्जनौ व्यक्तिहरुले मुक्ति पाए जनताले प्रहरीको अनुसन्धानमा चासो नराखेका भए सायद निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर निर्मलाको हत्यारा भनी टाठो मार्ने प्रहरीको प्रयास सफल हुने थियो होला ।
नेपाली समाज चनाखो भएकाले प्रहरीलाई निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाउन अहिले पनि दवाव परिरहेको छ र । निर्मलाका हत्यारा ठूलो ओहादाका, धनाढ्य, राजनतिक दलका ठूला नेता संग साँठगाँठ भएकाले अहिले पनि सो घट्ना कसले घटायो भन्ने कुरा गुपचुप राखिएको छ । निर्मला बलात्कार पछि हत्या घट्नाका दोषी पत्ता लाउन नसकेको अवस्थामा फेरी पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्याले चर्चा पाएको छ । पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या भनिएको घट्नामा विगतमा न्यूज २४ मा एकै साथमा काम गरेका पत्रकार पुडासैनी । एक महिना देखि अर्को टेलिभिजनमा काम गर्दै आएका थिए । न्यूज २४ छाडेर गएको आधारलाई मानेर हो वा के कुन आधारमा हो पत्रकार रवी लामिछाने उपर पत्रकार पुडा सैनिलाई अत्महत्या गर्नु गर्न बाध्य बनाएको भन्ने आरोप लाइएको छ ।
पत्रकार पुडासैनी स्वर्गवास भएकाले उनी र पत्रकार लामीछाने विचमा के कस्तो हेलमेल थियो वा रिसइवी थियो, पत्रकारद्वय लामीछाने र पुडासैनी निकट साथीहरुलाई थाहा हुने कुरा हो । प्रहरी प्रशासनले यस घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगले गर्नु पर्छ । कसैको प्रभाव र दवावमा परेर अनुसन्धान कर्ताले गलत बाटो अपनाउन मिल्दैन । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान मा के कहाँ त्रुटी भएको छ ? विशुद्ध अनुसन्धान भएका छ छैन आम जनताको चासो भएकाले संचार माध्यमले यो घटनाको अनुसन्धानलाई नजिकबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ । अनुसन्धान पुरा भए पछि अभियोग पत्र साथ मुद्दा अदालतमा बुझए पछि अदालतले तत्काल थुनछेकको आदेश गर्ने भएकाले । तत्काल संकलित प्रमाणका आधारमा के कस्ता प्रमाणहरु संकलित भएका छन् । पत्रकार लामीछाने उपर आरोप लाग्नुको मुख्य आधार के हो ? सार्वजनिक भएको भिडियोमा के छ ? सो भिडियोमा भएको श्वर र अन्य सम्पादन गरिएको आवाज प्रहरीले अनुसन्धानबाट पत्ता लाउने नै छन् यदी प्रहरीबाट गलत भएको खण्डमा प्रहरीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा जनताले दबाब दिनुनै पर्ने छ । पत्रकार पुडासैनिको रेकर्ड भएको अवाज लाई न्यायालयले विशषेज्ञद्वारा राम्रो संग जाँच गर्ने नै छ । मुद्दामा संकलन भएका प्रमाणहरुलाई न्यायाधीशले केलाएर प्रचलित नेपाल कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार पत्रकार लामीछाने उपरको मुद्दामा थुनामा राखेर कारबाही गर्ने वा धरौट तथा तारेखमा राख्ने आदेश हुने नै छ ।
वर्तमान अवस्थामा पत्रकार रवी लामीछाने उपर मुद्दाको अनुसन्धान भएको हो मुद्दा तत्काल फैसला हुने होइन अझै अदालतबाट प्रमाण संकलन हुने कार्य हुने छन् । प्रहरीबाट कथंम कदाचित गल्ती अनुसन्धन भएको रहेछ भने अदालतले गल्तीलाई करेक्सन गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त हुने हुँदा कसैले पनि आत्तीनु पर्ने अवस्था होइन । मुलुक संघिय लोकतन्त्रमा गै सकेकाले मुलुकमा कानुनको शासन रहेको छ । कानुनले ठुला साना, धनी गरिव भनेर विभेद गर्दैन कानुन सबैका लागि समान हुन्छ ।
हामीले भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त पाठक उपर अख्तियारले छानविन गरिएको घट्ना हाम्रा अगाडि ताजा छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा एसपी दर्जा सम्मका प्रहरीहरु उपर छानविन गरि मुद्दा चलिरहेको अवस्था संचार माध्यममा आएको छ । नेपालका प्रहरी अधिकृतलाई अनुशन्धान सम्बन्धी तालिम दिन विभिन्न देश पठाइएको छ । यसर्थमा प्रहरीहरु अनुशन्धान गर्नमा सक्षम छन् । हुनसक्छ कसैको दबाबमा प्रहरीहरुले अनुशन्धानमा तलमाथि पार्न सक्छन्, यसमा जनदबाबको आवश्यकता उत्तिकै छ ।
पत्रकार लामीछानेका विरोधीहरु र समर्थकहरुले आकासै झरी हाल्छकी भनेर अहिले नै डराउनु तथा खुशी हुनुपर्ने अवस्था होइन । नेपाली जनता विवेकी छन् गल्ती गर्नेले कानुन अनुसार सजाय पाउनु पर्छ भन्ने हामी नेपालीको पवित्र भावनाले भनिरहेको हुन्छ । तसर्थ हामीले पत्रकार लामीछानेलाई सजाय दिनुपर्छ पर्दैन भन्नेमा नारा जुलुस गर्नु भन्दा पनि घटनाको सही ढंगले छानविन गरिनु पर्छ भन्नेमा सबैको एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
केही घटनामा अपबादका रुपमा अनुसन्धान फितलो भए पनि नेपाल प्रहरीले केही घट्नामा राम्रो संग अनुसन्धान गरिएका उदाहरणहरु पनि छन् । यसर्थ रवी लामीछानेको “सिधा कुरा जनतासंग”कार्यक्रमबाट प्रभावित भएका तथा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा उत्रीएका पक्षधरहरु र सो कार्यक्रमबाट जागिर गएकाहरु, कारबाहीमा परेकाहरु तथा भोलीका दिनमा भ्रष्टाचार गर्न नपाईएला अर्थात आफुले गरेका कर्तुतहरु बाहिर आउलान भनेर त्रसित भएकाहरु अहिले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । हामी सचेत नेपालीले एउटा व्यक्तिको पछी लाग्ने समय पनि होइन समग्र मुलुकको कानुनी प्रकृया र अनुसन्धान पद्दतीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । रवी लामीछानेले ” सिधाकुरा जनता सँग” कार्यक्रम चलाएको लामो समय भएको छैन ।
नेपालमा रवी लामीछाने भन्दा मुलुक र जनताकालागि योगदान दिने पत्रकारहरु धेरै छन् । पंचायत कालमा पदम ठकुराठीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धमा, भुमाफियाका विरुद्धमा, मुर्तिचोरका विरुद्धमा कलम चलाउँदा सुतिरहेका ठाउँमा गोली हानिएको थियो तत्काल उपचार गरिएकाले पत्रकार पदम ठकुराठी बाँच्न सफल भएका थिए । पंचायती व्यवस्थाको विरुद्धमा कलम चलाउने पत्रकार उपर पंचायतकालमा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा खेप्नु पर्दथ्यो । पत्रिकाको दर्ता खारेज हुन्थ्यो छापाखाना सिज हुन्थ्यो । मण्डलेहरुको कुटाई खानु पर्दथ्यो ।
पत्रकारहरु पनि यहि समाजका उपज हुन । पत्रकारबाट गल्ती हुन्न अर्थात पत्रकारले अपराध गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न मिल्दैन तसर्थ घट्नाको बारेमा विशुद्ध छानविन हुनु पर्छ पत्रकार भएकै कारण गल्ती गरेकोमा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।
यस्ता धेरै अबयवहरु पार गरेका धेरै पत्रकारहरुको तुलनामा पत्रकार रवी लामीछाने लाई सामान्य मान्नु पर्ने हुन्छ । एउटा पत्रकार, वकील, इन्जीनियर, डाक्टर तथा सरकारी कर्मचारी सही छ वा गलत भनेर हेर्नलाई कम्तिमा २० वर्षको समय उसले गरेका कामको मुल्याँकन हुनुपर्छ । ४ महिना राम्रो काम गरेर ४ वर्ष नराम्रो काम पनि गर्न सक्छन् ।
पत्रकार रवी लामीछानेले कार्यक्रम चलाएको विषयलाई लिएर सायद एक पटक पनि जेल जानु परेको छैन होला । केही धम्की आए होलान् । पत्रकारीताको भाषामा पत्रकारले समाचार लेखे पछि कित ताली खानु पर्छ , कित गाली खानु पर्छ । रवी लामीछानेले चलाएको ”सिधाकुार जनता संगा”कार्यक्रममा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेकाहरुले तालि दिएकाछन् भने भ्रष्टाचारी, भुमाफिया, तेलमाफिया आदीले रवी लामीछानेलाई गाली गरेका छन् । पत्रकारले गाली मात्र होइन कुटाई पनि खाएकाछन् कतिपय पत्रकारले समाचार लेखेको विषयमा ज्यान आहुति दिएका छन् । नेपालमा मात्र होइन विश्वमा पत्रकारको अवस्था घटीबढीमात्र हो उस्तै रहेको छ ।
पत्रकार रवी लामीछानेको विषय भनेको पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या संग जोडिएको र सो आत्महत्या का सन्दर्भमा सार्वजनिक भिडियो का बारेमा हो यसमा सही ढंगले अनुसन्धान हुनुपर्छ । न्याय प्रेमी नेपाली जहिले पनि न्यायको पक्षमा उभिने गरेकाछन् यहाँ पत्रकार लामीछानेको समर्थन र विपक्षमा होइन निष्पक्ष छानविन गरी दोषिलाई कारबाही निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिनेमा सबैको एकमत हुनु पर्छ ।
पत्रकार रवी लामीछाने टेलीभिजनमा कार्यक्रम चलाएर यति छिटै प्रख्यात भएका हुन् । जे भए पनि रवी लामीछानेले ”सिधाकुरा जनता संग”कार्यक्रमबाट मुलुकमा भएका घुस, भ्रष्टाचार, अनियमिताका बारेमा जनता का माझमा सन्देश पु¥याएकाछन् । आगामी दिनमा पत्रकार रवी लामीछाने दोषि ठहरिए पनि निर्दोष ठहरिए पनि जनताका पक्षमा र घुस, भ्रष्टाचार, अनियमितताको विरोधमा कलम चलाउने छन् भन्नेमा आसाबादी बनौं ।
रबि लामिछानेको समर्थनमा जनउभार आएको छ, त्यो मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टचारको कारण हो यदी सरकारले घुष, भ्रष्टचार, कालोबजारी जस्ता अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने जनताले सरकारलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्ने थिए । तर सरकारका काम कार्यवाहि हेर्दा भ्रष्टचारीलाई अपराधिक गतिविधिका व्यक्तिलाई सरकारले बचाउ गरेको पाइन्छ । राजनितिक दललाई चन्दा दिए पछि व्यक्तिले गरेका सम्पूर्ण अपराध माफि हुने र राजनितिक दलको दबाबमा सरकारले त्यस्ता अपराधिक व्यक्तिको बचाउ गर्ने गरिएका कारण सरकारले जनताको विश्वास जित्न सेकेको छैन । यसरी जनमानसमा सरकारले विश्वास गुमाउदै जाने हो भने भोलीका दिनमा मुलुकमा भयावहको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।